Madaxweyne Xasan oo sheegay Shabaab inaysan dooneyn horumarka Muqdisho | Baydhabo Online
Madaxweyne Xasan oo sheegay Shabaab inaysan dooneyn horumarka Muqdisho
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay Ururka Al Shabaab inaysan dooneyn horumarka, Bilcida iyo ammaanka caasimada Magaalada Muqdisho oo sanadihii dambe ka soo kabsanaysay xaalado dagaalo sokeeye ah.
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay Magaalada inay tahay mid wanaagsan oo dad fara badan oo Ajaanib ah ay soo gaarayaan, kuwaasi oo doonaya inay maalgashi ku sameeyaan dalka.
Waxa uu sheegay Shabaab oo ah cadowga koowaad ee dalka uu leeyahay inaysan arki karin bilicda caasimada Muqdisho iyo dadka oo nabad ku naaloonaya.
“Dadka Ajaanibta ah ee imaanaya Muqdisho Aragtida,Muuqaalka iyo Rayiga ay ka qaataan Caasimadda Somaliya ee Muqdisho ayaa Somaliya oo dhan lagu cabirayaa,sidaa daraadeed Shabaab oo ah Cadawga Somaliya waxa ay doonayaan in ay ka hortagaan in Muqdisho ay Bilic yeelato oo ay horumar sameyso.”Ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Al Shabaab oo dagaal adag kula jirta ciidamada Dowladda Federalka Somaliya iyo kuwa Amiso, ayaa si gaar ah bartilmaameed uga dhigata Muqdisho oo Saldhig u ah Dowladda dhexe, waxaana ay weeraro dhowr mar ka geysteen Hotelo ku yaal Muqdisho iyo Xeebta Liido oo dadka ay u damaashaad tagaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay Magaalooyinka kale ee dalka ka dhisan inay yihiin kuwa fiican, islamarkaana ay wanaagsanaan laheyd in la soo eego oo qiimeyn lagu soo sameeyo.
“Magaalooyinkeena kalena waa ay fiican yihiin waana Mudan yihiin in la tago oo iyagana Xaaladda Somaliya Laga Cabiro”ayuu sii raacsaday Madaxweynaha Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay leedahay cadow fara badan oo aanan aheyn Shabaab kaliya, iyadoo ay jirto inay nabdoon yihiin Magaalooyinka kale ee dalka ku yaalo, halka Muqdisho ay degi la’dahay.